Spear & Munsil UHD HDR Benchmark (UHD Blu-ray Disc) - Jiro MediaLight Bias
Home Spear & Munsil UHD HDR Benchmark (UHD Blu-ray Disc)
Vidiny tany am-boalohany $39.95 - Vidiny tany am-boalohany $39.95
Azafady mba vakio ny Torolàlana ho an'ny mpampiasa an-tserasera hianaranao ny fomba hanatsarana ny fampisehoanao amin'ny Toro-marika Spears & Munsil UHD HDR.
Na mpankafy sinema any an-trano ianao na kalibrator matihanina dia ho hitanao ny fitsapana rehetra ilainao hamboarina sy hanamboarana ny fampisehoana HDR anao amin'ny Spear sy Munsil UHD HDR Benchmark.
Ny fanontana teo aloha an'ny HD Benchmark dia notoloran'ny New York Times, Home Theatre Magazine, Widescreen Review, ary fanontana an-tserasera am-polony hafa. Ity fanontana vaovao ity dia misy lamina vaovao nohavaozina ho an'ny elanelana avo lenta, gamut miloko maro ary vahaolana Ultra HD
Ny lamina fanamafisana mba hanampiana amin'ny famolavolana fampisehoana ho an'ny mazava tsara indrindra
Ny lamina fanombanana ho an'ny fihetsehana, ny maranitra, ny fanitsiana loko ary maro hafa
Fitaovana fampisehoana tany am-boalohany vita amin'ny 8K HDR
Fampitaovana natao tao amin'ny HDR sy SDR ho an'ny fanombanana
Safidy maro be ho an'ny kalibrator matihanina
Ny lamina HDR rehetra misy amin'ny kinova 600, 1000, 2000, 4000 ary 10000 cd / m²
Ny Spears sy Munsil UHD HDR Benchmark no kapila fitsapana HDR marina indrindra sy feno azo ampiasaina na aiza na aiza. Ny lamina rehetra dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fitaovanay rindrambaiko tena avo lenta ary maneho ny toetoetran'ny kanto amin'ny famokarana horonantsary.
Spears & Munsil UHD HDR Benchmark dia tsy misy sivana manga avy amin'ny vanim-potoanan'ny SDR noho ny zava-misy tsotra izay tsy mandeha ny sivana manga amin'ny fampisehoana HDR. Ampiasao ny maody manga-sivana / manga ihany izay atolotra amin'ny fampisehoana sasany, na ampiasao ny fitaovana fanovozana marina hanamarinana ny lokony
rehetra Tsy misy amin'ny Internet ihany ny antontan-taratasy ary mety miovaova arak'izay aseho. Tsidiho ny tranokala S&M tsindraindray hijerena ireo torolàlana ho an'ny mpampiasa nohavaozina.
Na dia maro aza ny lamina azo ampiasain'ny mpanjifa, ity kapila ity dia misy koa lamina matihanina maro kokoa izay mila fitaovana. Azafady mba alao antoka fa izany no tadiavinao alohan'ny handefasana.
Na dia tsy azo averina aza ireo kapila nosokafana dia azo atakalo ireo kapila misy simba na simba.
4.7 Miorina amin'ny 16 Reviews
Fandefasana haingana traikefa nahafinaritra
Mampikorontan-tsaina izaitsizy. Fifanarahana mifangaro amin'ny efijery fanandramana tsy misy làlan-kaleha ary tsy misy ilana azy kely ho an'ny mpankafy tsy misy fitaovana fanadiovana. Tokony ho naveriko io saingy tsy nahatratra ny fe-potoana farany aho.
Raha ny tena izy dia fitambarana fitsanganana efa voarafitra mafy miaraka amina rafitry ny menio sarotra, nefa voalamina. Ny ankamaroan'ny lamina dia tsy azon'ny mpanjifa ampiasaina, fa maro kosa ho an'ny matihanina na ny mpanjifa. Izany dia hazavaina ao amin'ny disclaimer amin'ity pejy ity. Toa tsy nahatratra ny tari-dalan'ny mpampiasa azo sintonina ianao (eo amin'ilay karatra ao anaty ny rohy ny rohy). Misy ihany koa ny mora mora hanaraka ny Beginner's Guide nataon'i Scott Wilkinson tafiditra ao anaty fampidinana miaraka amin'ilay kapila. Mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria, tsy misy fiverenana ho an'ny kapila misokatra ivelan'ny fahasimbana na kilema, noho izany dia tsy diso ny varavarankely miverina ianao. Tsy misy valiny. Tokony hodinihina izany alohan'ny hanafarana. Ireo fampahalalana rehetra ireo dia eto amin'ity pejy antsipirian'ny vokatra ity. Miala tsiny izahay raha tsy azonao ilay izy. Misaotra tamin'ny famerenanao.
Disc kapila tsara
Mihazakazaka tsy misy kilema.
Tsara ho an'ny mpankafy
Ho an'ny olona iray izay mikasa ny hahazo ny tsara indrindra amin'ny fitaovako fotsiny dia gaga aho fa ny mahitsy sy mora ny fizotrany dia noho ny fahaizana ao ambadik'ity vokatra ity.
Traikefa nahafinaritra voalohany
Fanandramana tena tsara amin'ny MediaLight - vidiny lafo, fandefasana haingana tena tsara, tena nahafaly fa ilay entana no natsangana.